7 Day Weekly, Vol. 24, No. 40, December 9, 2015
‘‘ကမ္ဘာမှာ တရုတ်တန်းမရှိတဲ့ နိုင်ငံမရှိဘူး’’ဟူ၍ တရုတ်လူမျိုးများ ကမ္ဘာတွင် ပျံ့နှံ့နေထိုင်ရောက်ရှိမှုကို တင်စားပြောဆိုကြသည်။ သူတစ်ပါးနိုင်ငံများတွင် ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်း စုစည်းနေထိုင်ကြသည်ကို ဆိုလိုရင်းဖြစ်သည်။ ပြည်ပရောက် မြန်မာများအနေဖြင့်လည်း စင်ကာပူတွင်လည်းကောင်း၊ ထိုင်းတွင်လည်းကောင်း၊ မလေးရှားတွင်လည်းကောင်း မြန်မာတန်းများ အသီးသီးရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ လောက်ကိုင်မြို့တွင်ရှိသော ဗမာတန်းကတော့ ထူးခြားလှသည်။ မြန်မာနိုင်ငံထဲ၌ပင်ရှိနေသော ဗမာတန်းဖြစ်သောကြောင့်ပင်။
မူးယစ်ဆေးဝါးများ၊ နိုင်ငံတကာပုံစံ ကာစီနိုဝိုင်းများဖြင့် နာမည်ကြီးသော လောက်ကိုင်သည် တရုတ်ယွမ်ငွေသုံးသော မြို့ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ချောင်းကလေးသာခြားပြီး နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် ၅၅ တိုင်အထိရှိသဖြင့် တရုတ်အငွေ့အသက်သာ ဖုံးလွှမ်းသော လောက်ကိုင်ကို ဒုတိယ ရှန်ဟိုင်းအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဒုတိယ မကာအိုအဖြစ်လည်းကောင်း တင်စားပြောကြားကြသည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၃၀၀ ကျော် ပဒေသရာဇ်ခေတ်က စစ်ရှုံးမင်းတစ်ပါး တရုတ်ပြည်မှ မြန်မာပြည်ထဲသို့ ထွက်ပြေးလာခြင်းက ကိုးကန့်လူမျိုးတို့၏ အစပင်ဖြစ်ကြောင်း ကိုးကန့်သမိုင်းမှတ်တမ်း အချို့တွင် တွေ့ရသည်။ ပင်လယ် ရေမျက်နှာပြင်အထက် ပေ ၃,၁၀၀တွင်ရှိသော တောင်ပေါ်မြို့သည် ဝေးကွာလှသော ခရီးလမ်းကြောင့် ပြည်မရှိ မြန်မာများ အရောက်အပေါက်နည်းခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ ကျော် ကာလများဆီက ရွာကြီးအဆင့်သာ ရှိသေးသော လောက်ကိုင်သည် လက်နက်ကိုင်များ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးမျာအစဉ်အဆက်ပေါများပြီး နာမည်ဆိုးဖြင့် ကျော်ကြားသော သီးခြားကမ္ဘာတစ်ခုသာဖြစ်သည်။
သို့ဖြစ်ရာ ပြည်မရှိ မြန်မာများအရောက်အပေါက်နည်းသည်မှာ မဆန်းလှပေ။ ၂၀၀၉ တိုက်ပွဲများမတိုင်မီက ဦးဖုန်ကြားရှင်၏ လက်နက်ကိုင်များသည် ပြည်မမှ ကိုးကန့်ဒေသသို့ဝင်ပေါက်ချင်း ရွှေဟော်တံတား၌ ဂိတ်ဖွင့်ကာ စစ်ဆေးမေးမြန်းပြီး မြို့ဝင်ကြေး ယွမ် ၁၀ ကောက်ခံကာ ဝင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ချင်းရွှေဟော်မှ လောက်ကိုင်သို့ တစ်နာရီခန့် တောင်တက်ခရီး ဆက်သွားရပြီး ထိုစဉ်က နောက်ထပ် ကိုးကန့်ဂိတ်တစ်ခုကို ထပ်မံဖြတ်သန်းရသည်။
‘‘လောက်ကိုင်ကို ဗမာတွေ များများစားစား စဝင်လာတာဒကစဖွင့်မှပဲ။ တပ်က အဆောက်အအုံတွေဆောက်ဖို့ ဗမာပန်းရန်ဆရာတွေ၊ လက်သမားဆရာတွေခေါ်လာကြတယ်။ အဲဒီမှာ တချို့က မပြန်တော့ဘဲ ဒီမှာနေခဲ့ကြတာ’’ဟု လောက်ကိုင်မြို့တွင် လွန်ခဲ့သော ၁၈ နှစ်ကတည်းက ရောက်ရှိနေသော ဗမာလူမျိုး ဦးမြင့်က ပြောသည်။
အရှေ့မြောက်ပိုင်း စစ်ဌာနချုပ်၊ ဒေသကွပ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ် (လောက်ကိုင်)ကို လွန်ခဲ့သည့် ၁၆ နှစ်က စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဗမာတန်းဟု ခေါ်တွင်ခဲ့သည်မှာ ၂၀၀၉ ကိုးကန့်တိုက်ပွဲများပြီးမှပင် ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေတွင် လောက်ကိုင်နှင့် ကုန်းကြမ်းကို စုစည်းပြီး ကိုးကန့်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။ ၂၀၀၉ တွင် ဦးဖုန်ကြားရှင်၏ MNDAA ကိုးကန့်တပ်ကို မြန်မာ့တပ်မတော်က တိုက်ထုတ်ပြီးနောက် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးတွင် ဦးပယ်စောက်ချိန်သည် ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာပြီး ၎င်းမှတစ်ဆင့် အစိုးရက ကိုးကန့်ဒေသကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင်မှ ငွေရှာကောင်းသော လောက်ကိုင်သို့ စီးပွားရေးကျပ်တည်းပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသော အညာကျေးလက်မှ မြန်မာ များ တဖွဲဖွဲဝင်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ယောကျ်ား၊ မိန်းမတစ်မြို့လုံး ဘောင်းဘီသာ ဝတ်ဆင်သော လောက်ကိုင်တွင် ပုဆိုးနှင့်ထဘီ ဝတ်ဆင်ထားသော ဗမာလူမျိုးများကို ဗမာတန်း၌သာ တစုတစ်စည်းတည်း တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
လောက်ကိုင်မြို့ ဗဟိုချက် မြန်မာကိုးကန့် ငြိမ်းချမ်းရေး ကျောက်တိုင်ရှေ့တည့်တည့်တွင်ရှိသည့် ပေါင်ဖုန်းလမ်းကို ဗမာတန်းဟုခေါ်ဝေါ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုးကန့်တို့က တရုတ်ဘာသာဖြင့် ‘‘လောင်မြန်ကိုင်း’’ ဟု ခေါ်ဝေါ်သည့် ဗမာတန်းမှာ စင်စစ်ဗမာ ပစ္စည်းများရောင်းချသည့် ဆိုင်ခန်းများ စုစည်းထားသည့် တစ်လမ်းမောင်းလမ်းကလေးမျှသာ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယွမ်ငွေသုံးသော လောက်ကိုင်တွင် ကျပ်ငွေကိုသာ သုံး၍ရသော တစ်ခုတည်းသောနေရာပင်ဖြစ်သည်။ ကျပ်ငွေနှင့်ယွမ် ငွေလဲလှယ်၍ ရသည့်နေရာ၊ လောက်ကိုင်တွင် အလုပ်လုပ်သော မြန်မာလုပ်သားတို့
မြန်မာပြည်အရပ်ရပ်သို့ ငွေလွဲှသည့်နေရာ၊ မြန်မာအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ၊ အစားအသောက်များကို တစ်နေရာတည်းတွင်ရရှိနိုင်သည့် နေရာလည်းဖြစ်သည်။ ‘‘တခြားနေရာတွေမှာဆို ဘာဝယ်ဝယ်၊ ဘာလုပ်လုပ် စကားမပေါက်ဘူး’’ ဟု ဗမာတန်း၏ အသုံးဝင်မှုကို လောက်ကိုင်၌ တာဝန်ကျနေသော ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ရှင်းပြသည်။
တစ်နှစ်ခန့်ကြား တိုက်ပွဲများကြောင့် နယ်မြေမအေးချမ်းခဲ့သည့် လောက်ကိုင်၌ ကာစီနိုဝိုင်းများက စည်ကားလျက်ပင်။ ဟိုတယ်ကြီးများ၌ ဖွင့်လှစ်ထားသော ကာစီနိုဝိုင်းများမှ စီးဆင်းသော ငွေစီးကြောင်းသည် မြောင်းငယ်လေးတစ်ခုအနေဖြင့် ဗမာတန်းသို့ စီး ဆင်းပါသည်။ ကာစီနိုဝိုင်းများတွင် ဖဲဝေသည့် အလုပ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ အငှားထိုးသားအဖြစ်လည်းကောင်း အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော ဗမာအချို့သည် ၎င်းတို့၏ ဝင်ငွေကို ဗမာတန်းမှတစ်ဆင့်နေရပ်သို့ ငွေပြန်လဲွဲှပေးကြသည်။ (လောက်ကိုင်ရှိ ကာစီနိုဝိုင်းများမှာ Player (ထိုးသား)နှင့် Bank (ဒိုင်)ဟူ၍ နှစ်မျိုးပါရှိသည်။ Play-er သည် အပြာရောင်ဖြစ်ပြီး Bank က အနီရောင်ဖြစ်သည်။
လောင်းကစားလိုသူများသည် ကြိုက်သည့်အရောင်မှ ကြိုက်သလောက် ငွေကြေးပမာဏ ထိုးခွင့်ရှိသည်။ အငှားထိုးသားဆိုသည်မှာ အကြီးအကျယ်လောင်းကစားလုပ်သူများက သူကြိုက်နှစ်သက်သည့် အရောင်တစ်ဖက်တည်းမှ တစ်နေ့လုံးထိုးခိုင်းသည်ကို လခယူ၍ ထိုးပေးရသော အလုပ်ဖြစ်သည်။ လောင်းကစားခုံများကို နံပါတ်စဉ်ထိုးထားပြီး အနီဘယ်နှလှည့်၊ အပြာဘယ်နှလှည့် အလျော်အစားကို ပြန်လည်တောင်းယူ ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး လုံခြုံရေးကင်မရာများ
နေရာအနှံ့တပ်ဆင်ထားသဖြင့် လိမ်ညာ၍ မရပေ။ အငှားထိုးသားများ၏ လစာမှာ ယွမ်ငွေသုံးထောင် (ကျပ်ခြောက်သိန်း)မှ ယွမ်ခြောက်ထောင် (ကျပ် ၁၂ သိန်း)အထိ ရှိ ပါသည်။ ဖဲဝေပြီး အလျော်အစားလုပ်ပေးရသည့် ဝန်ထမ်းများ၏လစာသည် ယွမ်နှစ်ထောင်ခန့်ပင်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၅ ဒီဇင်ဘာတွင် 7Day Newက လောက်ကိုင်သို့ သွားရောက်လေ့လာခဲ့ရာ ကာစီနိုဝိုင်းငါးဝိုင်းထက်မနည်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
လောက်ကိုင်မြို့အနှံ့ ဆိုင်းဘုတ်တိုင်းလိုလိုတွင် တရုတ်စာများအောက်၌ မြန်မာသတ်ပုံအမှားများကိုသာ တွေ့ရသည်။ ဥပမာ အနည်းငယ်ပြရလျှင် ‘‘ကျောက်မျက်ရတနာကို’’ ‘‘ကျောမျက်ရတနာ’’။ ‘‘တည်းခိုခန်း’’ကို ‘‘တည်ခိုခန်’’။ ‘‘အလှကလေး’’ကို ‘‘အလကေလေး’’ဟူသော စကားလုံးများပင်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် ဗမာတန်းအနီး၌လည်း ထင်လီတီဗီဂိမ်း၊ ဟွေ့ထုန်ဟိုတယ်၊ ကျင်းဖူးရင်ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယို၊ ရှင်ယွင်ဆေးဆိုင်၊ ကျားယွင်ဟိုတယ်၊ တုံဟန်ထုန်ရွှင်ဖုန်းဆိုင်ဟူသော ကိုးကန့်လား၊တရုတ်လားမကွဲပြားသော နာမည်များက ဝန်းရံထားသည်။
ဗမာတန်း၌သာ ပန်းသစ္စာစာရေးကိရိယာနှင့် ကုန်မျိုးစုံဆိုင်၊ ချစ်ကြည်ရေးထမင်းဆိုင်၊ မြတ်သုခအထူးကုဆေးခန်း၊ ကောင်းထက်သာကဖေး၊ ဇီဝကဆေးဆိုင်စသော ဗမာဆန်ဆန်နာမည်များကို သတ်ပုံမှန်မှန်ဖြင့် တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
လောက်ကိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ သီးခြားနယ်မြေတစ်ခုတင်စားနိုင်သလို ဗမာတန်းသည်လည်း ကိုးကန့်ဒေသ၏ သီးခြားနယ်မြေလေးတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ အဝတ်အထည်၊ အစားအသောက်နှင့် လူသုံးကုန်မှစပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးခန်းနှင့် အပန်းဖြေစရာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊ ဘီယာဆိုင်အထိ မြန်မာပစ္စည်းမှန်သမျှ ဗမာတန်းတွင် အကုန်ရနိုင်သည်။ လောက်ကိုင်တစ်မြို့လုံး၌ မြန်မာ စည်ဘီယာသောက်ချင်လျှင် ဗမာတန်းရှိ ဟိုက်စွမ်စည်ဘီယာဆိုင်၌သာ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဗမာတန်းတွင် အပေါဆုံးက ကွမ်းယာ ဆိုင်များပင်ဖြစ်ပြီး ၁၀ ဆိုင်ထက် မနည်းရှိသည်။
တရော်ကင်ပွန်းနှင့် ခေါင်းလျှော်လိုလျှင်လည်းရသည်။ ပစ္စည်းလေးပါး ဒါယကာလုပ်ချင် လည်း ဗမာတန်းတွင် ဝယ်ယူရရှိ နိုင်သည်။ တစ်ရက်နောက်ကျပြီးမှ ရောက်လာသော နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာများကို ဖတ်နိုင်သလို မြန်မာဗီဒီယိုကားများလည်း ငှားရမ်းကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ဘောလုံးစာစောင်လည်း ရောက်သလို ဘောလုံးပွဲလည်း လောင်းနိုင်သည်။ အပျင်းပြေ ပိုကာဒေါင်းနေသည့် ဗမာအချို့ကိုလည်း အလွယ်တကူတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဗမာတန်းရှိမြန်မာများကို တစ်ချိန်ကအကြီးအကျယ်ဒုက္ခပေးခဲ့သည့် ဂိမ်းဆိုင်များကိုမူ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလအတွင်းက အမြစ်ဖြတ်ထားလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ လောင်းကစားဝါသနာကြီးသော ဗမာအချို့မှာ ကာစီနိုဝိုင်းများသို့ ပြေးကြသည်။
‘‘ဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ ဗမာတွေကို ဒုက္ခပေးတာ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ လောင်းကစားပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဆိုင်လာတဲ့ ကိုယ့်လူတွေကို ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ အမြဲတမ်းဆုံးမပါတယ်။ မရပါဘူးဗျာ။ မူးယစ်ဆေးဝါးတော့ ရှောင်နိုင်ကြပေမယ့် လောင်းကစားကျတော့ မရှောင်နိုင်ကြဘူးလေ’’ဟု ဗမာတန်းမှ ချစ်ကြည်ရေးထမင်းဆိုင်ရှင် ဦးသန်းတင်က ပြောသည်။
ယင်းအခြေအနေများကြောင့် စစ်ဘေးရှောင်စဉ်က တရုတ်များနှင့် ဗမာများ ကွာခြားပုံကို ဦးသန်းတင်က ရှင်းပြသည်။
‘‘သူတို့ကပြေးတော့ ဒီအတိုင်းလက်ဗလာနဲ့ ပြေးတာ။ ကျွန်တော်က မေးကြည့်တယ်။ ခင်ဗျားတို့ဘာမှ သယ်မသွားဘူးလားဆိုတော့ တရုတ်ဘဏ်စာအုပ်လေး ထုတ်ပြတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန် တော်တို့ ဗမာတွေကတော့ အဝတ်အစားထုပ်တွေ၊ အိုးတွေ၊ ခွက်တွေ၊ အစုတ်ပလုတ်တွေ သယ်လို့။ ကျွန်တော်ဗမာလူမျိုးပါ။ ကိုယ့်လူမျိုးနှိမ်တာ မဟုတ်ဘူး။ ဟိုကောင်တွေနဲ့ ကွာတာကို အားမရတာ’’ဟု ၎င်းကပြောသည်။
သိကြသည့်အတိုင်း ဗမာဟူသည် ‘‘ပျော်ပျော်နေသေခဲ’’ဟူသော ဆောင်ပုဒ်ကို လက်ကိုင်ထားသည့်လူမျိုးဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးအဓိကကြည့်သော တရုတ်တို့ကြားတွင် ပရဟိတဆိုလျှင် ရှေ့ဆုံးမှ ဖြစ်သည်။ ဗမာတန်းတွင် ကရုဏာဟဒယလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့ရှိသည်။ တိုက်ပွဲကာလအတွင်းကလည်း ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခဲ့သကဲ့သို့ ယခုအထိလည်း သာရေး၊ နာရေးကူညီမှုများ လုပ်ဆောင်နေသည်။
ဗမာတန်း၏ နံနက်ခင်းတွင် ကြာနီကန်ဆရာတော် ဦးဇဋိလ၏ တရားတော်ကို ကြားနာနိုင်ရသလို နေ့လယ်ခင်းတွင်လည်း နီနီခင်ဇော်၏ မျှော်လင့်ချက်တစ်စုံတစ်ရာသီချင်းက ပျံ့လွင့်နေတတ်သည်။
ဗမာတန်းရှိ မြန်မာများ၏ ကူညီသော မျှော်လင့်ချက်တစ်စုံတစ်ရာမှာမူ တည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီး စီးပွားရှာကောင်းဖို့ဟု ဆိုကြသည်။
‘‘ဒီမှာက ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်နေ့ယွမ် ၅၀ တော့ ရှာလို့ရတယ်။ ယွမ် ၅၀ ဆို တစ်သောင်းလေ။ မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်လိုရှာမလဲ’’ဟု မကွေးမြို့မှ လာရောက်ပြီး ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီဆွဲနေသူ ကိုမင်းမင်းက ပြောသည်။
မြန်မာများသည် ကြံခုတ်ရန်၊ ကာစီနိုတွင် အလုပ်လုပ်ရန်၊ ဝပ်ရှော့တွင် လုပ်ရန်၊ ဆိုင်ကယ်ကယ် ရီဆွဲရန်၊ ဈေးရောင်းရန် အသီးသီး လောက်ကိုင်သို့ ရောက်ရှိလာကြပြီးနောက် မပြန်ချင်ကြတော့ပေ။ လောက်ကိုင်၌ တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်ချိန်ကသာ ခေတ္တရှောင်နေကြပြီး အနည်းငယ်အေးချမ်းပြီ သတင်းကြားသည်နှင့်
ပြန်လည်ရောက်ရှိလာကြသည်။ ဗမာတန်းရှိ အချို့ဆိုင်များသည် တိုက်ပွဲကာလအတွင်းကပင် မပြန်ကြကြောင်း သိရသည်။
‘‘ကျွန်မကတော့ ဒီလောက်ကိုင်မှာပဲ အခြေချမယ်’’ဟု ဗမာတန်းတွင် အိန်ဂျယ်အလှပြင်ဆိုင်ဖွင့်လှစ်ထားသူ မထွေးက ပြောကြားသည်။
ကိုးကန့်များစီးသော လိုင်စင်မဲ့ကားအကောင်းစားများက ဗမာတန်းထဲသို့ ဖြတ်သန်းသွားလာလျက်ရှိသည်။ လောက်ကိုင်-လား ရှိုးပြေးဆွဲသော ကားများက ဗမာတန်းတွင် လူခေါ်လျက်ရှိသည်။ တပ်မတော်သားများက အစောင့်အရှောက်ပေးထားသည့် တပ်မိသားစုများ ကားများဖြင့် ရောက်လာပြီး ဗမာတန်း၌ ဈေးဝယ်နေကြသည်။ ဗမာတန်း၌ မြင်နေကျ မြင်ကွင်းအချို့ပင်။ ဗမာတန်းထိပ်ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေးကျောက်တိုင် အရှေ့တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ၂၄ နာရီ လုံခြုံရေးပေးလျက်ရှိသည်။
ဦးဖုန်ကြားရှင်၏ တပ်များက ဗမာတန်းဆိုတာ မရှိစေရဘူးဟု ကြိမ်းဝါးထားသည့် ကောလာဟလများလည်း ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသည်။
စင်စစ် ဗမာတန်း ပျောက်၊ မပျောက် ဆိုသည်မှာ ဦးဖုန်ကြားရှင်တပ်များ ကြိမ်းဝါးမှုအပေါ်တွင် မမူတည်ပေ။ ကိုးကန့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ အပေါ်တွင်သာ မူတည်သည်။ အကြောင်းမှာ ဗမာတန်း တစ်တန်းလုံးရှိ ဆိုင်ခန်းများကို ကိုးကန့်များထံမှ ဗမာတို့က ငှားရမ်းဖွင့်လှစ်ထားရခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။